Moa ve hydraulic ny famindrana fox? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Famerenana ny famindrana Fox - boky feno
Famerenana ny famindrana Fox - boky feno
Moa ve hydraulic ny famindrana fox?
Misaotra ny nitrogen-sprunghydrauliccartridge, nyfamindranadia azo ovaina tsy misy farany ary misy modely roa, samy misy na ny anatiny na ny ivelany no mandeha: ny kinova Factory, miaraka amina famaranana Kashima, ary ilay kinovan'ny Performance anodized mainty lafo vidy.
Na aiza na aiza no misy ny paositry ny seza mitete, eny fa na dia ao anaty afo sy loto aza. Ny zavatra tsara hitazomana azy hihazakazaka tsara kokoa dia ny mamadika azy haingana. Hasehoko anao ny fomba hanaovana azy anio. (feo midoboka) Amin'ity lahatsoratra ity dia hanompo rafitra miorina amin'ny cartridge toa an'io Crankbrothers Highline io isika.
Ny Rockshox Reverb na Fox Transfer dia mampiasa rafitra somary hafa kely ary tsy mahomby amin'ny fomba toy izany. Araka ny hitanao dia efa nesoriko ny tsatoka teo amin'ny bisikileta. Raha mampiasa kasety masking ianao dia afaka mifikitra kely fotsiny eo amin'ny lalantsara.
Hanamora anao ny famerenana azy amin'ny toerana mitovy, ary azonao atao koa ny mametaka zavatra amin'ny tariby famindrana izay eo ambanin'ny paositry ny seza. Midika izany fa tsy hianjera ao anaty toe-javatra intsony izy io ary mety hanasarotra ny asanao raha apetrakao indray ny paositra. Azonao atao ihany koa ny manamarika hoe hatraiza ny haben'ny satelita satinize ny frame amin'ny alàlan'ny fampiasana ny marika eo amin'ny tsatokazo.
Ho an'ity serivisy ity dia mampiasa lakile Allen 10mm aho, lakilen'ny Allen 5mm, ary lakile Allen 2.5mm. Ary koa, mampiasa kitapo kely sy palma kely fisaka izay antsoinay hoe marotoa tavo, zavatra izay manana safidy tsy metaly, izay tena ilaina tokoa.
Mampiasà menaka fampiatoana tsara sy malama koa, mpanadio isopropyl ary lamba famaohana manga. Ny zavatra voalohany hataoko dia ny manasaraka ny cartridge amin'ny tampon'ny prop. Ataonao izany amin'ny alàlan'ny fanesorana ny clamp amin'ny seza miaraka amin'ny lakileninao 5mm Allen.
Ka nesoriko avy eo ny fametahana ny seza, ny fivoriambe iray manontolo ary hapetrako amin'ny lafiny iray izy io, hotehiriziko amin'ny toerana azo antoka, ary hiverina aho avy eo. Ary eo an-tampon'io seza io dia misy ireto 2.5mm kely indrindra ireto izay tsy misy zavatra tena ilainao esorina satria ny faritra azo ampiasana rehetra dia azo idirana avy eto ambany saingy nieritreritra aho fa hasehoko anao ny fomba tsotra.
Volomaso kely tena izy io. Eny indray, apetraho amin'ny toerana azo antoka. Raha avelanao eo izy dia mampanantena aho fa hiala io ary tsy hiverina intsony izy io ka hampiasa ny fivorian'ny clamp saddle hametrahana azy amin'ny toerana tsara sy azo antoka.
Ny cartridge dia misaraka amin'ny tapany ambony. Ny zavatra hataontsika izao dia esorintsika eto ambany ity fiangonana iray manontolo ity. Azonao atao ny mampiasa vise amin'ny clamping, na misy interface 10mm izay tsara sy tsotra.
Raha somary tery io dia angamba makà lamba famaohana fotsiny mba hividianana kely. Andao. RelativR mora atao.
Avy eo vao tokony hivoaka amin'ny tanana. Ka ity ampahany ity dia ampahany mampihetsi-po, ka indraindray ity iray ity eto, amin'ny fomba sasany azon'izy ireo atao karazana korontana sy zavatra toy izany, ny actuator etsy ambany dia alika vita tsara ka tokony ho tsara. Ny fikororohana kely amin'ny lever dia mety hitarika ho amin'ny harafesina na esorina eto, koa raha izany no izy dia mety mitete ranon-diloilo iray monja, manosotra ny kiho sasany ary manadio ny tampony, ary izao dia tapaka ny cartridge eo amin'ny ambony, azontsika atao ny mamoaka ny zava-drehetra ary mandry, toy ny nolazaiko d, azo tanterahina io serivisy io raha tsy alefaso io visy io, midika fotsiny izany fa mipoitra avy any ambany ny zava-drehetra fa mora ny manao azy ary ny zavatra manaraka dia dia ny hanala ity vozon'akanjoko ity.
Eo no ipetrahan'ny tombo-kasenanao lehibe ary mitazona ireo singa tsy hivoaka izy ireo. Tena ilaina izany mba hitazomana azy hihazakazaka tsara. Raha misy tsindrim-peo be ao amin'ny rafitra rehefa tena miadana ny filàzany dia io no tena meloka aminao.
Azonao atao ny mahita ity fantsona iray manontolo ity miala fotsiny eto, ary tena zava-dehibe tokoa, hodiovintsika io ao anatin'ny fotoana fohy. Ity bushing ity dia miorina eo ambanin'ny tombo-kase lehibe, izay mety hiteraka olana aminao amin'ny paositra sasany. Inona no mitranga dia miditra ny fasika ary manakaiky ny fifandeferana izany, raha misy loto ao anatiny dia mahazo izany sandingana mahatsiravina izany ianao rehefa mitete avy any ambadiky ny paosinao ny teboka fotsy ary tena miova tsikelikely vao tonga teo ny marika kely iray ary azontsika esorina fotsiny izany.
Araka ny hitanao eto amin'ity paositra ity dia manana ilay antsoinay hoe lakile eto izahay. Ankehitriny ny ataon'ireto dia ny fampijanonana ny kilalao. Raha somary nitaredretra ny paozin'ny sezanao dia mety ho reraka izy ireo.
Fa izy ireo dia namboarina hitafy ary ny tiako holazaina amin'izany dia ireo no azo soloina ampahany izay manakana ny seza seza lafo vidy tsy ho voasoratra intsony rehefa mampivelatra lalao. Ka asa mora tokoa izany. Manana slot kely izy ireo ao ary azontsika atao fotsiny ny misisika screwdriver lohan-doha kely ao ambany ary manangana azy ireo.
Araka ny nolazaiko, ity dia ampahany azo soloina ary izy io dia natao hampiasaina mba hiarovana ny sezanao ary haharitra kokoa. Ary ny tapany farany amin'ny fivoriambe izay ilaiko fotsiny ity screwdriver ity mba hanesorana ilay peratra kely kely nipetrapetraka teo amin'ilay hazo. Eny raisintsika fotsiny izany, apetraho izy ary midika izany fa afaka miala fotsiny ity gasket ity, tsy maintsy esorinao ny lakilen'ny fidirana amin'ny zotram-pianarana rehefa tsy mandeha ity dia azo antoka fa manamora kokoa ny fanosorana azy io, ankehitriny tanteraka ny seza ankoatra izany dia izao no fotoana hanaovana fizahana sy fanadiovana tanteraka.
Toy ny mahazatra amin'ny faritra fampiatoana anao, ampiasao jiro jiro ho an'ny fizahana ary ity dia tena hanampy anao tokoa hahita ny pitsopitsony kely mety tsy ho azon'ny hazavana mahazatra. Eo am-pananganana ny toeran'ny sezantsika izahay izao. Manoro hevitra mafy aho hitandrina ny tavy ampiasainareo.
Te hanana menaka fampiatoana ianao hampiasa menaka fivoriambe mahazatra, matevina loatra izy io, manjavozavo ary miteraka fifandirana ary hiadana be ny sezanao ary izany no antony, ka menaka manify mahafinaritra. Izahay izao dia te-hampiasa makarakara mavesatra be dia be amin'ity interface ity, ka alohan'ny hanombohantsika manangona ny fipetrahana dia hametraka ampahany salama eto isika ary tiako ihany koa ny hieritreretanao ny fantsom-bokatra miasa ireto bokotra ireto. alao sary an-tsaina ny fomba fiasan'ny seza iray, indrindra amin'ny bisikileta sasany izay misy zoro fantsom-baravarana somary ambany kokoa ary mety hijanona tsy ho mpitaingina mavesatra loatra, ny hery rehetra avy amin'ireo bokotra kely roa ireo dia niongana, ny hery dia saika avy any aoriana sy any ambanin'ny bisikileta ary lasa tery loatra ka ireo ampahany somary kely ireo dia tsy maintsy mandray enta-mavesatra somary lehibe.
Ilaina ihany koa ny manamarika raha mijaly ny bisikiletanao ary manana bisikileta fantsom-bolo ny bisikiletanao, mety manandrana manova ny lanjanao mifanaraka amin'ny paositry ny seza ianao. Tsy mitsangana, fa andalana. Izy io dia mitazona ny sezanao seza lava kokoa ary mampihena ny adin-tsaina tokony horaisiny.
Raha apetratsika eto ity tombo-kase ity, raha terenao toy izao fotsiny izy dia tsy ho tiany mihitsy, ka andao isika hanomboka eo, heveriko fa efa ho 45 ao amin'ny paositra no mamadika azy dia hisokatra fotsiny izy. Handeha hisisika azy io tsy hiala amin'ny lalana isika alohan'ny hamerenantsika eto ity fivoriambe fanalahidy sy faladiany ity. Ka manana ny fanalahidiko eto aho ary hametraka azy io amin'ny tànany avy eo ary avy eo, miaraka amin'ilay faritra malefaka amin'ny tantanana. (Hammer hammer) Hihazakazaka fotsiny aho, alao antoka fa tsara izany, hipetraka aho ary avy eo hijerijery maso mba hahazoana antoka fa mifanitsy amin'ny lahatsoratra ilay ambony.
Raha zoro izany dia tsy apetraka araka ny tokony ho izy. Averiko indray ilay peratra fitifirana ary avy eo dia ho eo fotsiny aho. (Chill music) Mila vitaina tsara io tombo-kase io.
Tazomy, ity karazana faritany ity, tsy mila manalavitra azy ianao. Ka eo no alehanao, ity no tombo-kase rehetra. Amin'ny ankapobeny, ny sisa ataontsika ankehitriny dia ny mametraka indray ny cartridge.
Ka haidiko ao izany, raiso ilay visy kely 2.5mm kely indrindra, ary afatory fotsiny amin'ireo visy alimina kely ireo ary asio resaka be dia be toy izao. Raha tena tianao ho azo antoka fa tsara sy tery izy io dia ataovy amina wrench hex tsara sy mendrika.
Raha ataonao amin'ny lohan'ny baolina izany dia ho karazana fahavoazana amin'ny visy ihany, izay mazava ho azy no zavatra farany tadiavintsika. Amin'ity tombo-kase ity eto, miaraka amin'ity peratra O ity, ny tena zava-dehibe dia ny tsy haha-jammed azy, tsy tonga amin'ny zoro izany, ary tsia Tsy manelingelina na inona na inona tadiavin'ireto kofehy ireto aho. Ka ny hataoko dia apetraka eo ambony latabatra fotsiny dia apetaho toy ny mahazatra ny zava-drehetra dia aforeto fotsiny.
Hosakanantsika fotsiny izany. Tsy mila manilika an'io ianao ry zalahy. Ankehitriny dia mila apetaka eo amboniny fotsiny ny clamp amin'ny lasely.
Tena zava-dehibe ny orientation eto amin'ny fametrahana ity clamp seza ity. Hadisoana kely an'ny vao manomboka ny iray amin'ireo faritra ireo ary tsy ho mety mihitsy ny toerana ipetrahanao, koa mitandrema kely fotsiny. Na dia toa tsara aza ireo, misy ny sezan'ny seza sasany mijaly amin'ireto bolt ireto, na izany aza, miasa mihalefaka izy ireo rehefa mandeha ny fotoana, ka mendrika ny diovina amin'ny alikaola isopropyl, esorina ireo menaka rehetra ary asio lakaoly kely.
Ny antony maha-zava-dehibe ny fanadiovana azy ireo dia satria tsy afaka mandeha tsara ny dity raha voaloton'ny diloilo. Tandremo fotsiny. Tsara izany, saingy, fantatrao ihany, raha mijaly amin'izy ireo ianao dia manaova kely fotsiny. (Chill music) Ary eo no ananantsika.
Toy izao no anaovana serivisy amin'ny seza misy cartridge, toy ity Crankbrothers Highline eto ity. Izay ihany no tsy maintsy ataonao, apetaho amin'ny bisikileta dia afaka mandeha ianao. Raha te hifikitra amin'ny lakandrano ianao dia azonao atao ny mijery ny lahatsoratra fikojakojana izay nataoko tamina serivisy tamina fotoana tena izy.
Ilaina ny manamarina, ka kitiho eto ambany ity iray ity ary raha te hahita fomba fito ahafahanao manimba ny bisikiletanao ianao dia tsindrio eto ambany hanombohana an'ity Dodster ity. Misaotra anao fa aza adino ny tia sy misoratra anarana ary mikapoka izany lakolosy fampandrenesana izany, mifankahita amin'ny manaraka.
Miaraka amin'ny lever ve ny Fox Transfer?
Hita amin'ny loko Kashima sy loko mainty ity lahatsoratra ity. Amidy amin'ny $ 299- $ 349 USD izy io.Leversmisy misaraka amin'ny $ 65 USD.14 apr 2020
Tiako ny bisikiletako, mahafinaritra izany, azo ampiasaina izy ary maivana toy ny helo. saingy nisy zavatra nanelingelina ahy tato ho ato ary izany dia hoe mafy izany.
Tsy mbola nahatsikaritra an'io mihitsy aho taloha fa hatramin'ny nanombohako ity fantsona ity ary nirakitra an-tsarimihetsika ireny dia mila mihaino ny diany mandritra ny fanitsiana, ny hany henoko dia ny gadona vitsivitsy tiako ny feon'ny kodiarana eny amoron-dàlana fa tsy henoy fa henoko ny tariby ary avy eo henoko zavatra hafa izay mbola tsy hitako hoe efa ela izay, fa io seza io ihany no mampirongatra ny dia rehetra rehefa avy any atsimo aho. tsy haiko raha toa izany foana na vao miharatsy kokoa ianao dia afaka maheno izany ao amin'ireo lahatsoratra misy ny lalana ary izao angamba no nanoratako izany taminao, dia handre bebe kokoa fotsiny ianao - ka hamboariko anio raha izaho manaova famindrana Foxfactory izao -Mametraha toeran-dàlana, mariho izao, tsy manam-pahaizana momba an'io aho, afaka nanao zavatra ratsy maro aho fa hasehoko anao ny tsara indrindra vitako ary raha manao hadisoana aho dia hiezaka ny hanondro Izy ireo dia afaka miara-mianatra isika rehetra, ny zavatra nataoko voalohany dia izay mety ataonao izao. Nanao fikarohana haingana tao amin'ny YouTube aho mba hitadiavana lahatsoratra fampianarana vitsivitsy hitako fa roa na telo amin'izy ireo ary tsapako fa dingana tsotra io ahafahako manatona azy am-pahatokisana, ka manantena aho fa tsy ho adala, fa ny voalohany. ny zavatra hataoko dia refesina manomboka amin'ny vozon'akanjo ka hatrany amin'ny lalamben'ny seza mba hahazoako teboka fanombohana tsara momba ny hahavon'ny habaky ny lasely handraisana ny seza vozon'akanjo 9 inch hametrahana lalamby ka ny dingana manaraka dia ny fahazoana ilay seza taloha nipetraka tao anaty bisikileta, tokony ho mora ilay izy rehefa nisintona ilay lasely aho dia nesoriko ilay tariby nefa tsy nieritreritra ny hisintona ampy ilay tranga aho, mba hahatratrarana azy ka nampandehaniko ilay tariby ny lamosina amin'ny alàlan'ny lalana hafa ary nanome ahy zavatra hakana izany ary rehefa misintona azy aho dia mitondra ny tanany tariby miaraka aminy. Azoko antoka fa misy fomba maro hafa sy fomba tsara kokoa hanaovana an'io, saingy izany no noheveriko fa ny fotoana izao dia manala ny toerana hipetrahana ary tiako hosoloina ny tanany tariby amin'ny tanany tariby vaovao dia izaho azafady fa tsara ny taloha, saingy hey izy io dia iray amin'ireo zavatra tianao hatao, whoa, ao ianao, inoako fa mba hanamorana kely ny zavatra hataoko eto dia manana tanany tariby aho miaraka amin'ny tariby ao anatiny ary manapaka ny farany aho, alao ilay tanany tariby vaovao apetraka toy izany ary avy eo dia esory ny fonosana fonon-tànana roa sy ny fanamafisana kasety kely manodidina ilay - Heveriko fa ho ampy hanaovana izany fa miaraka amin'izay dia misintona ny lining aho, ankehitriny manana ny lasely avy amin'ilay paositra taloha aho dia apetrako eo an-tampon'ny paositra vaovao alohan'ny hametrahana ilay bisikileta mba hahamora kely ahy dia handrefesako, hitantsika eo amin'ny sivy santimetatra eo ho eo isika avy eo amin'ny lalamby sivy santimetatra dia eo amin'ny tsipika misy eo anelanelan'ny T sy ny tsorakazo ilaintsika hametrahana ny felona fonenana ny tanany tariby ary tsy maintsy ataontsika eo amin'ny tariby ny tariby sy ny jack, misy zavatra manitatra ka izao dia efa tafiditra ny seza fipetrahana, fantatro raha tena tokony ho lava ny tanany tariby no nanamarika azy aho ary hivoaka aho ny seza any aoriana mba hahafahako mamoaka sy manapaka ny tariby mba hahazoana antoka fa ny bokotra fanitsiana dia miditra tanteraka mba hahafahantsika mandanjalanja malalaka ireo fantsom-pifandraisana izay ho lehibe tokoa ka tsy hisy lalao amin'ity fampiharana ity, hisy mavesatra kokoa ny tabataba amin'ny làlana mahavariana, azoko atao ny milaza ny anarako hoe Cody ary mijery ny Lunch Ride ianao, raha tianao ilay lahatsoratra, raha toa ianao ka nanampy fa misoratra anarana ny mamaky toa ny mizara amin'ny namanao mandra-pahatongan'ny fotoana manaraka
Azonao atao ve ny manitsy ny dia amin'ny Fox Transfer?
Mampiasa nyfamindranaSeza sezabe
Tsindrio ary tazomy ny lever mandritra ny fiovan'ny haavony: Tsindrio ary tazomy ilay leverfiovanahaavon'ny soavaly. Tariho ny laselyo toy nymiova ianaohaavo: Ampiasao ny vatanao hanindry ilay lasely toy nymiova ianaohampihenana ny fametrahana ny haavon'ny lasely ary hitarihana ny laselyo rehefa miverina amin'ny toerana avo kokoa ianao.
Rehefa namoaka ny paosin-dropper vaovao ny OneUp Components, ny iray amin'ireo mampiavaka azy dia ny fahaizany hanafohezana ny dia hahamety kokoa azy. Ankehitriny dia liana tamin'io endri-javatra io foana aho raha te hahita raha afaka mahazo paositera hafa aho, izay tsy nataon'ny OneUp Components. Azo atao tokoa izany.
Ary amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba. (mozika amin'izao fotoana izao funky) Hey daholo, ny anarako dia Joseph ary anio dia hasehoko anao ny fomba ahafahako mampiasa lahatsoratra mitete iray izay tsy nataon'ny OneUp Components fa nahavita nanohy ny dia. Raha ny tena izy, ny antony tianao hanafohezana ny dia amin'ny dropper post dia ny fahazoana ny toerana mitaingina tonga lafatra hahafahanao miakatra mahomby.
Saingy azonao atao ny mampidina ny seza faran'izay ambany araka izay azo atao rehefa midina an-tendrombohitra tokoa ianao. Ny OneUp Components dia manao izany ankehitriny mba hananan'izy ireo mpanasa plastika izay azonao soratana amin'ny habeny mety ary tafiditra ao amin'ny seza seza vario. Izany dia manakana ny lasely tsy hiakatra amin'ny fotoana iray, izay midika fa afaka manana ny toeran'ny dropper postdown tena izy ianao raha mbola lavitra araka izay azo atao ao amin'ny fantson'ny seza eo am-pitondrana ilay lasely any amin'ny toerana mety indrindra isaky ny mandeha.
Ankehitriny rehefa hitako ity endri-javatra ity dia liana aho raha afaka mahazo azy io hiasa amin'ny fitaovana teleskopika hafa ihany koa, fa tsy ireo nataon'ny OneUp Components ihany. Mampalahelo fa efa namidy saika hatraiza hatraiza ilay kapila plastika kely izay ampiasanao azy ary tsy azoko mihitsy ny tanako. Hatramin'ny vao haingana dia tena niantsena aho ary nitazona leverin'ny sezako mba hanodinana lahatsoratra fampitahana amin'ny valizy maro.
Araho maso ity lahatsoratra ity amin'ny ho avy, fa ity kitapom-pahefana OneUp Components ity dia niaraka tamin'io mpanasa lamba io ihany. Ka tamin'ity mpanasa lamba ity no azoko natao, azoko natao ihany ny nanandramana azy tao amin'ny paosin-dranonay ary hitako fa tena mety. Ankehitriny izao dia ny bakalorea PNW Components, fa te hahalala aho raha toa ka mifanaraka amin'ity shim ity ny lahatsoratra hafa mitete, na mandray anao manokana.
Ankehitriny, alohan'ny hanehoako aminao ny fomba nanamboarako azy ireo ho mendrika, avelao aho aloha hanafoana ny andraikitra rehetra. Mampidi-doza izaitsizy ny fakana seza seza mitete raha tsy fantatrao izay ataonao. Betsaka ny fanerena na loharano tena matanjaka ao amin'ireto seza ireto ary afaka mandratra tena ianao raha misy tsy mety.
Raha manandrana an'ity ianao dia ataovy izay hahazoana antoka fa manana namana afaka manampy anao handalo an'io ianao, mety ho mekanika bisikileta mandritra ny fotoana feno ary tena mahatakatra ny ao anaty ao amin'ireo paositry ny dropper. Raha tsy izany dia mangataka aminao aho mba tsy hanandrana an'io mandra-pahitanao fomba azo antoka. Amin'izay tsy misy ny lalana, avelao aho hampiseho aminao ny fomba nametrahako ilay shim.
Ka raha hitanao tokoa ny fametrahana ny singa PNW an'ny shim dia hitovy sy hitovy be izy. Nesorinao ny satroka ambony ary avy eo atsangano ny fononteny mitete kely hahatratrarana ny tsindry fotsy ary hivoaka ny tsipika fitetezana, rehefa madio ny zava-drehetra dia afaka mipetaka manodidina ianao ary manandrana mahita sombina kely telo izay hidiran'ity mpanasa lamba ity. Ao amin'ny PNW Components, ireto slot ireto dia antsoina hoe lafiny Spin Stop Technology.
Raha ny fahitana azy, ny OneUp Components dia mitovy refy ihany ka ny fampidirana dia mifanaraka tanteraka. Ankehitriny rehefa manana ny sisiny eo amin'ny toerany izahay dia afaka mamerina azy rehetra ary miodina im-betsaka fotsiny ilay tsipika fampidinana mba hahazoana antoka fa nanala ny 50 milimetatra ny dia izahay; tsy nanapaka ny fanasan-damba izahay, fa te hampandeha azy fotsiny. Ary raha ny marina dia manana 50 milimetatra ny dia nesorina, koa ndao hongotantsika izy ary handrefesana haingana mba hahitantsika hoe tena hatraiza ny faniriantsika.
Izao dia mandray fandrefesana vitsivitsy amin'ireo ampahany eto aho, ity jack fotsy ity eto dia 18 milimetatra ny halavany ary refesiko ny fantsona miditra aminy amin'ny alàlan'ny fampiasana ilay kapila plastika ho toy ny mpanapaka. Schow anao, ny zavatra ataoko eto ary ny lojika ao ambadik'izany. Maniry aho fa afaka mamorona sary mihetsika mahafinaritra mba hampisehoana azy ireo, saingy mampalahelo fa manome sangisangy momba izany aho.
Ka nanao fanoharana haingana fotsiny aho mba hahitana ilay resaka. Noho izany dia manana fizarana hazo fijaliana amin'ny paositry dropper eto ankavia isika, ary avy eo ny fijery ambony ambany ambany. Ity takelaka eto ity, izay ny tena fanohanan'ny tsipika mitete, dia 18 milimetatra ny haavony.
Ankehitriny ny fantsom-pidirana idirany dia 21 ka hatramin'ny 22 milimetatra ny halaliny, izay midika fa rehefa eo am-pototry ny paositry ny seza ity dia eo amin'ny telo ka hatramin'ny efatra milimetatra eo ho eo ny fahazoana madiodio. Zava-dehibe izany ankehitriny satria raha apetrakao ity mpanasa lamba ity, raha tapaka fohy loatra ianao dia ho hitantsika eto ireo fahitalavitra telo ireo eto amin'ny top top ary ireo no fantsona telo ho an'ny teknolojia fijanonana mihodina izay soloin'ny varahina miakatra sy midina. Ka rehefa miseho izy ireo dia afaka manosika ilay plastika ambony sy mivoaka raha tapaka fohy loatra.
Izany dia vokatry ny zava-misy fa tsy nanampo velively ny hidiran'ny PNW ny kapila iray. Nahaliana ahy izao raha afaka mandray tariby tariby ianao ary mampiasa izany ho shimif kely, mila milimetatra vitsivitsy fotsiny no ilainao. Ka norefesiko ity fatotra zip ity, notapahiko araka ny habeny, ary avy eo nofenoiko tao anatin'io fantsona kely io.
Saingy indrisy fa tsy tena namelatra ilay jack ary rehefa nohamafisiko ny zava-drehetra dia nisy fatorana sy fikorontanana be dia be avy tamin'ity zip zip ity. Ka raha ny marina rehetra dia tsy mendrika ezaka akory izany; mandehana ny dia ilaina mba hanesorana ireo dimy na enina milimetatra ireo, ary avy eo afindrohy fotsiny ny seza fipetrahana milimetatra vitsivitsy fanampiny hahazoana ny haavon'ny lasely eo hahatratra izay ilanao azy ireo. Tena tsy maintsy nanao dia kely aho tamin'ity seza ity satria ity 150 ity dia somary lehibe loatra ho ahy tao amin'ilay chromag.
Ka nanapa-kevitra ny handray dia lavitra milimetatra folo aho ary hamboariko araka izany. Eny ary, tsy miverina intsony izao. Ho marin-toetra tanteraka aho, kely dia kely ny raharaha nidina an-tsehatra tao amin'ny The Channels nilahatra tanteraka.
Naharitra fanandramana roa ary zip sasany hikopaka azy tao. Saingy rehefa azoko ihany ilay izy ary naoriko tamin'ny toerany ny faladiany dia fahatsapana fahafaham-po lehibe ny niakarako an'io sy ny fihazakazako rehefa afaka volana maro mba hitondrako ny tanako amin'ity ampahany kely ity. Eny ary, andao handeha.
Ity no nametrahako ny dian'ny dropper post-ko. Saingy alohan'ny handehananao, satria fantatro fa vonona hanidy ity varavarankely ity ianao, te-hanome anao fisarahana fisarahana, heveriko fa ity dia tokony ho fampiasa mahazatra amin'ny poste rehetra Vario, endrika iray izay tsy anananao manokana, Zavatra hafahafa hatao, mahasosotra tokoa ny fananana tsipika fitetezana izay mifanentana tsara avy eo dia mividy bisikileta vaovao misy fantsom-pipetrahana somary lava kokoa ianao ary tampoka izany dia tsy maintsy mividy paositry ny seza vaovao ianao. Eny, azonao atao ny mivarotra azy, fa avy eo tsy maintsy mandeha amin'ny olana rehetra ianao.
Tsara fotsiny ny mametraka ampahany plastika tsotra toa ny nataoko teto ary avelao hifanaraka tsara izany. Raha ny mifanentana dia azoko lazaina. Eny ary, azo antoka fa tsy hiasa amin'ny Fox Transfer io.
Nojereko ireo skotozy an-tserasera, tsy tsara ho an'ny olona iray ny misosa plastika sasany. Te-hahita Fox aho, na angamba orinasa antoko fahatelo, mety ho avy? Amin'ny kitapo ahafahanao mametraka ny tenanao na mitovy amin'ny fomba hanitsiana ny dia eo amin'ny fork eo anoloana dia mahazo lohataona rivotra vaovao ianao, apetrakao any amin'ny fivarotana bisikiletanao, mila dimy na folo milimetatra miala ny fipetrahana izao, izao mifanaraka tsara kokoa. Raha ny momba ny paositry ny dropper izay iasan'ny shim dia heveriko fa ny sasany amin'ireo paikady fampidinana Race Face dia hiasa ao aminy, angamba ny sasany amin'ireo mpikirakira PNW Component hafa mety hiasa aminy, ary rahoviana, ity lahatsoratra ity dia tsy notohanan'ny PNW Ireo mpiorina na voataona, io ihany no hany dropper azoko.
Ka ampahafantaro ahy ny hevitrao momba ity lahatsoratra ity. Mametraha hevitra etsy ambany. Ampahafantaro ahy raha toa ka mifanaraka amin'ity mpanasa lamba ity ny dropper-nao, mahaiza liana, angamba manangona lisitra ary manaova lahatsoratra manaraka raha hitanao fa mahasoa ilay lahatsoratra, tianao ary zarao amin'ny namana vitsivitsy, fa mahita anao amin'ny manaraka, mandehana Mivoaha eo ary tadiavo ny fiainanao manaraka.
Ampy ve ny dropper 100mm?
100mmtsara, ary 125mm mandeha tsara koa.19 nov 2014
Ry zalahy a, hieritreritra haingana momba ny paositra dropper ilainao amin'ny bisikiletinao izahay. Mba hialana amin'ireo faritra roa mora indrindra dia ampidiro ny savaivan'ny fantsom-bokatra, izay sivy amby telopolo isa iraika ambin'ny folo isa enina amin'ny bisikilety an-tendrombohitra amin'izao fotoana izao, noho izany dia mety ho hitanao ny taonina misy paosin-dropper amin'ireo habeny misy ireo satria ireo no haben'ny seho roa mahazatra indrindra amin'ny bisikileta an-tendrombohitra. Misy fito fito amby roapolo azo alaina ho an'ny sasany amin'ireo fantatrao, angamba vy henjana antitra sy ny toy izany? ary misy ihany koa ny fironana vao tsy ela izay dia poste dropper lehibe kokoa izay sivy 34 isa, fa roa amby roapolo sy efatra amby telopolo teboka sivy somary kely fahita noho ny enina 30 isa sivy na iraika amby telopolo enina dingana iray dingana roa dia ny tariby mitarika anao hahita ity lahatsoratra ity fa manana ny tanako eto aho, ny tariby dia ampidirina ao ambany, ka io no antsoina hoe fanodinana tariby anatiny na fitifirana mangingina heveriko fa ny RockShoxre Verb no namorona ilay hoe stealth routing fa eto no tena misy ilay tariby avy any ambany, ka tsy maintsy fantatrao izay mandeha amin'ny bisikiletanao mba hahitanao azy eto amin'ity bisikileta ity kanefa kosa i hasis dia manana tariby mandeha anatiny ka tsy mahita tariby tonga ianao satria ny tariby tena misy an'io paositra io dia miditra ao anatiny ary raha ny marina dia mivoaka any, dia toy izany koa ny lahatsoratra anatiny ny paositra ivelany izay fantatrao fa ny bisikileta maro amin'izao fotoana izao dia manana làlana anatiny na mangingina amin'ny paositra droppe r dia manana ny sasany amin'ireo efa zokinjokiny izay mety tsy takiana aminao dia mety mila ilay ivelany misy ny plugs tariby ao amin'ny s zavatra eto.
Ampidiro eto, noho izany ny savaivon'ny paositra sy ny fitetezana tariby dia ireto ny ampahany tsotra roa, ny faritra sarotra kokoa dia ny fizotran'ny poste dropper sother any ho any ary heveriko fa enimpolo hitia enimpolo izao ny iray valopolo dia misy vitsivitsy ihany. ny dia mahazatra indrindra ny paositry ny dropper dia 1 25 milimetatra izay manodidina ny dimy santimetatra ka io no mahazatra indrindra. Dimam-polo koa dia lasa malaza be. Ny olon-drehetra dia manandrana mitondra fiara mitete lehibe kokoa hatrany amin'izao fotoana izao, noho izany zavatra hafa iray izay mihevitra ny olan'ny dia.
Araka ny hitanao eto amin'ity bisikileta ity eto raha manana ianao rehefa jr androany. Raha fantatrao ny haavon'ny laselyo dia karazana extensor feno ianao toy ny rehefa mihanika na toy ny nametraka azy tamin'ny bisikileta fifaninanana raha izany no izy, fa ny sezanao kosa tsy maintsy eto ambany, ity dropper ity dia tsy mety satria be loatra ny dia dia tsy ho vitanao ny hametraka ny sezanao ho ambany, izany dia fiheverana lehibe, ary koa ho an'ny tena haavon'ny lasely fantatrao fa ho azo atao eto, azonao atao ve izany? manonitra izany na manana dia be loatra ianao amin'izay ny tranga fantatrao rehefa mandray ny refy ianao dia mety ho toa oh 125 dia lehibe loatra nefa azoko atao ny manome dropper 100 mil ao aminy, na angamba refesinao ary hoy ianao hoe oh aho nahazo betsaka tamin'io? Ny toerana ho an'ny 125 angamba azoko ampidirina 150 na 170 amin'ireo refy ireo dia somary manahirana eo ambanin'ity lahatsoratra ity dia hisy rohy izay misy kisary vitsivitsy kokoa, manazava izy io fa somary tsara kokoa, saingy somary sarotra ihany, ka maro amin'ireo dropper- Lahatsoratra ananany dia omeko anao ny famaritana lava ny tsirairay izay jerenao sy ny halavany avy eo amin'ny toerana misy ny lasely ny fanambanin'ny paositra na fantatrao ny faran'ny vavahady kely ary tsy maintsy mandoa ianao diniho akaiky izany Ka tokony hiverina amin'ny bisikileta ianao raha tsy mitete. Hamarino tsara fa ny laselyo dia eo amin'ny haavo avo indrindra, izany hoe rehefa manana squat kely amin'ny toerana fiakarana ianao.
Raha vantany vao eo ianao dia handrefesanao izany avy amin'ny lalambelin'ny sezanao hatrany ambany ary tianao ny mamantatra hoe hatraiza ny halaviranao afaka mandroso ny halalin'ny fidirana mba hahafahanao mahita toa ity bisikileta ity eto, mazava ho azy fa ity frame ity ihany no azonao jerena lavitra be, ka raha tokony apetrako eto ity dia afaka milaza aho fa tsy mety io satria mety hipoka eto io, koa ity lahatsoratra manokana ity raha toa ka tsy maintsy raisiko etsy ambany io ary mbola ny tsara haavo iray amin'ny lasely, tsy mety izany, noho izany dia mila avo kokoa izy ary avy eo ny haavon'ny lasely marina sa tokony hiakatra ambonimbony, ka somary manahirana ve eto ary te hikarakara ny tenanao ianao? Fantaro ny fitsangantsanganana seza fitetezana ary avy eo ny halavany ary avy eo ny haavon'ny lasely ampiasainao ary ataovy ny kajy raha toa ka manana ny halalin'ny fidirana marina ianao ary raha izany dia inona no hamela anao handeha? Ahafahanao mihazakazaka 170 na 125, 100, sns. Noho izany somary misavoritaka ihany aho raha nanonona ny rohy etsy ambany miaraka amin'ny masomboly hafa momba ny fomba fihinanana, fatoriana, ary fifohana bisikileta an-tendrombohitra, ary faly mamaly fanontaniana momba ny zava-misy. fa ny poste dropper dia tena fahita ankehitriny, ka mety efa bisikileta iray ao an-tsaina ianao, raha tsy izany, ity lahatsoratra ity dia azo antoka fa misy ifandraisany aminao raha manana bisikileta misy dropper any ianao ary mieritreritra ianao hey te-hivezivezy bebe kokoa aho ahoana no ahafantarako raha mifanaraka izany. Ka amin'ity tranga ity indray dia manjary mandrefy refy vitsivitsy fotsiny izy ary mahita izay mety.
Raha mijery ity lahatsoratra ity eto ianao, mieritreritra ve ianao fa ny filazanao 150 hoe te hitondra fiara 170 ianao dia ho ambany kokoa eto ary avy eo ianao dia tokony hitandrina ny halalin'ny fampidiranao ary alao antoka fa tsy handeha lalina loatra izany mandra-pahatongan'ny Ity ambany ity dia ambany ary tsy mitovy amin'ny endriny rehetra, ka ny frame sasany dia mety manana ny halalin'ny fampidirana hafa ho an'ny hafa fantatrao fa na dia fantsona lava kokoa noho io aza dia manana halaliny fampidirana lava be, noho izany dia bisikileta tsotra tsotra, tsipika fitetezana tsy manahy be loatra ny zavatra tsy hainao loatra momba ny halalin'ny fidirana, fa izany no izy. Ny sasany amin'ireo fototra ary fantatro indray fa lohahevitra sarotra io ary sarotra be ny mamantatra fa misy zavatra tokony hatao Ataovy ny matematika ary makà refy vitsivitsy amin'ny anao bisikileta manokana, fa izany no ampahany ahazoana antoka fa mandeha io ary tsy hijanona oh lehibe ho anao ianao na fohy loatra ho anao izay tsy dia misy olana loatra, saingy ny olana mahazatra dia ny fahafantarana fa betsaka ny olona tsy manana lahatsoratra miharihary etsy sy eroa ary tsy afaka mifanaraka amin'ny propperte dropper ka hanao izany izy ireo mila dia an-tongotra 100 tapitrisa na fitsangatsanganana 80 tapitrisa na zavatra hafa mitovitovy amin'ny tranga hafa handrefesana ny refinao ka maro ny refy hodinihina eto, fa manantena aho fa nanala ny sasany tamin'ny fisavoritahana izany ary nahatonga azy io tsy hampisavoritaka.
Misaotra anao nijery, aza misalasala mamela hevitra etsy ambany ary ampahafantaro anay ireo lahatsoratra dropper efa nohazakainao ary raha hitanao hoe ohatrinona ny bisikiletanao rehefa mieritreritra ny hividy seza ianao dia nofy ratsy ho anao fa manana isa maromaro izahay amin'ireo lahatsoratra momba ny seza fipetrahana hafa izay tokony hiseho eto ary eny andao isika hiantso anay hampahafantaro anay ny zavatra andefasanao 'mihazakazaka indray ary misy fanontaniana na olana hafa mety hanananao, aza misalasala mandefa mailaka aminay Alefaso mailaka amin'ny fampahalalana amin'ny Cyclery manerantany ary mijanona ao mikasika. Ary nolazaina aho mba hangataka anao hisoratra anarana amin'ilay lahatsoratra sy hanaitra ny ankihibe
Inona ny paositra maivana indrindra?
Famoahana ny fanerena: 9point8 Fall Line R
Maivana noho ny lanjan-tsoratry ny mpifaninanadroppers, ny kinovan'ny kapoka 75mm dia 322g ihany no misy azy (miaraka amin'ny loha milahatra) ary an'izao tontolo izaopaositra maivana indrindra. Ny lanja napetraka * dia latsaky ny 390g! Kapoka lava kokoa ihany koa.
Fitsangatsanganana inona ny forkofan'ny Fox?
Atosiho ny stanchion o-ring, mihodinaforktanteraho tanteraka ary apetaho, avelao ny rivotra bebe kokoa hivoaka mandra-pivoakany, averina averina indray, potserina im-betsaka ary omeo 'up' malefakanymamily raha mitazona ambany (mba hahazoana antoka fa tsy 'mikatso' izany dia refesaho ny halavan'ny stanchion mankanynyo-peratra Haneho anao ny tena izy izy ioTsangatsangana.
Ampy ve ny dropper 80mm?
Raha izany dia dia lavitra dia lavitra<80mmmety angamba ny lahatsoratra. Ianao ve mitadymiteteny lasely mankany amin'ny fifindrana avy amin'ny toerana misy pedal mahazatra mankany amin'ny iray izay ahafahanao manova mora kokoa ny lanjanao any aoriana ho an'ny fifehezana tsaratsara kokoa amin'ny fidinana ara-teknika? Avy eo ny dia lavitra kokoa> 150mm angamba ny kitaponao.24 Jan. Oktobra 2018
Ampy ve ny dropper 125mm?
ny125mmdia mihoatra nyampyhialana tanteraka amin'ny lasely. Midika izany raha olona lava tongotra sy a ianao125mmzara raha mahazo ny lasely eo ambanin'ny bara dia eny mety hilatsaka fanampiny ianao.9 Aogositra 2017
Tena mila poste dropper ve aho?
Ny antony lehibe indrindra anaomila paosy dropperdia ny mandeha eo anelanelan'ny fametahana pedal ary mijoro mamily ny rano na ny mitsambikina. Mpitaingina enduroNILAhahafahana mandeha an-tongotra lavitra amin'ny halaviran-davitra sy terrain maro karazana, fa izy ireo koaNILAhamafana ny faritra tena teknika mba hananan'izy ireo ny fampiasana betsaka indrindra apaosin-drakitra.4 feb 2019
Ohatrinona ny dia ataon'ny Fox 32?
nyFox 32Ny fork orinasa dia misy amin'ny kodiarana 29 'sy 650b miaraka amin'ny 120mm an'nyTsangatsangana, famaky 15mm amin'ny alàlan'ny familiana ary familiana nidina.7 apr 2020
Ahoana no ahafantarako hoe ohatrinona ny dia ataon'ny forkako?
Raha manandrana mandrefy ny totaliny ianaoTsangatsanganaianao dia hoeFAhamela ny rivotra hivoaka hivezivezy mora foana nyforkamin'ny alàlan'ny hetsika mihetsika iray manontolo. Mampiasà famatorana zip amin'ny manodidina ny stanchion hahafahana mandrefy. Atsofohy hatrany amin'ny tombo-kase wiper ny fatotra zip ary atsofohy nyforkhatrany. Ity no totalinaoTsangatsangana.14 feb 2009
Iza no post famindrana tsara indrindra ho an'i Fox?
The Takeaway: Fox's Transfer Dropper post dia vaovao rehetra amin'ny 2021, miampy fanavaozana mandavona ny hatairana DPX2 sy ny fork 34. Remote dropper vaovao (sy nohatsaraina) dia mifanaraka amin'ny lahatsoratra famindrana taloha Float DPX2 shock dia nahazo fanavaozana mihasimba nilaza fa hanatsara ny zava-bita rehetra Grip2 damper dia azo alaina ao amin'ny hazandrano 34 maivana
Ohatrinona ny famindran'ny Fox ny vola lavitra?
Fox dia mametaka lahatsoratra famindrana ivelany amin'ny habe mitovy amin'ny vidiny mitovy. Ny remote 2x / 3x universal dia azo alaina ihany koa amin'ny $ 65. Ny kinova Fox Transfer Factory dia misy fihenan-tsofina mifono kashima ary amidy amin'ny $ 344 (paositra fotsiny).
Misy olana ve amin'ny famindrana Fox?
Na dia teo amin'ny teboka samihafa aza ireo namako mpitaingina ahy dia nifanena tamina olana tamin'ny paositera mitete, ny Fox Transfer dia tsy nandiso ahy indray mandeha, na dia teo aza ny fepetra sarotra. Hitako fa ny mari-pana mangatsiaka indrindra dia nampiadana ny hetsika tamin'ny Transfer tad, fa raha vao nafana ny raharaha dia niverina niverina ho amin'ny tena izy, hetsika haingana izy io.